ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် အမ်ဘာပေ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကစားသမားက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ? - xyznews.co
ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် အမ်ဘာပေ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကစားသမားက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဲ့ ရွှေဘောလုံးဆုပေးပွဲကြီး ကတော့ တလကျော်သာ လိုပါတော့တယ် ။
ဒီဆုကို ပြင်သစ် ရဲ့ နာမည်ကျော် မဂ္ဂဇင်း တခု ဖြစ်တဲ့ L’Equipe က ကြီးမှူး ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး မနှစ်က ဆုပေးပွဲ ကတော့ ကိုဗစ် ကပ်ဘေးဆိုးကြီးကြောင့် မကျင်းပဖြစ်ဘဲ ဖျက်သိမ်း ခဲ့ရ ပါတယ် ။
L’Equipe ဟာ ဒီနှစ် အတွက် စကာတင် ကစားသမား အယောက် ၃၀ ရဲ့ အမည်စာရင်းကို ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားပြီး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ၊ ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ၊ ဂျော်ဂျင်ဟို တို့ ၃ ဦး က ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစား နေခဲ့ကြပါတယ် ။
လက်ရှိ မှာတော့ ဘောလုံးသမားတွေ ၊ နည်းပြတွေ ၊ သုံးသပ်သူတွေ ဟာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ရသင့် ရထိုက်တယ် ဆိုပြီး သူတပြန် ကိုယ်တပြန် ထောက်ခံ ပြောဆို နေကြပါတယ် ။
PSG အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးလေး ခီလီယံ အမ်ဘာပေ ကတော့ ဒီနှစ် ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် ကလပ် အသင်းဖော် လီယွန်နယ် မက်ဆီ ကို ရွေးချယ် ထားပါတယ် လို့ ဖွင်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာပေ ဟာ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်းခေါင်းဆောင် မဟုတ်တာကြောင့် စည်းမျဉ်း အရ မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ မဟုတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ စိတ်ကြိုက် ကိုတော့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ နဲ့ ဘာပေ တို့ ဟာ အင်္ဂါနေ့ညက လိုက်ပ်ဇစ် ကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် မှာ ကိုယ်စီ ဂိုးတွေ သွင်းခဲ့ ကြပြီး PSG အတွက် အဖိုးတန် ၃ မှတ်ကို ရှာဖွေ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
နေမာ ဒဏ်ရာကြောင့် မပါ နိုင်တဲ့ ဒီပွဲမှာ မက်ဆီ နဲ့ ဘာပေ တို့ဟာ အတွဲညီညီ ကစားခဲ့ကြသလို ပွဲချိန်တွင်း ရရှိတဲ့ ပင်နယ်တီ ၂ လုံးကိုလည်း မျှေ၀ ကန်သွင်းခဲ့ကြပါတယ် ။ မက်ဆီ ရဲ့ ပင်နယ်တီ ဝင်ခဲ့ပေမယ့် ဘာပေ က တော့ မဝင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ၂ ဦး အကြားက ချိတ်ဆက်မှုကတော့ ပိုမို အားကောင်း လာခဲ့ ပါတယ် ။
“မက်ဆီ လို ကစားသမားမျိုးနဲ့ တွဲဖက် ကစားရတာက အရမ်းကို ဂုဏ်ယူဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ တကယ်လို့ သူသာ ဒီနှစ် ရွှေဘောလုံးဆုကို ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ လုံး၀ ထိုက်တန်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လာမှာပါ” လို့ ဘာပေ က L’Equipe ကို ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာပေ ဟာ ဘောလုံး လောက ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး တကိုယ်တော် ဆုကြီးကို မရယူ မပိုင်ဆိုင် ဖူးသေး ပေမယ့် မက်ဆီ ၊ ရိုနယ်ဒို တို့ မရှိတော့တဲ့ ခေတ်မှာ ရွှေဘောလုံးဆုတွေ ကို အများဆုံး ရယူနိုင်မယ့်သူ ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ် ညွှန်းဆို ခံထားရသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာပေ ဟာ မကြာသေးတဲ့ နှစ်တွေကမှ စတင်ပေးအပ် ခဲ့တဲ့ လူငယ် ရွှေဘောလုံးဆု ကိုတော့ ဆွတ်ခူး ရရှိ ထားဖူးသူ ဖြစ် ပါတယ် မက်ဆီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီတုန်းက ဘာစီလိုနာ နဲ့ ကိုပါ ဒယ်ရေး ရှုံးထွက် ဖလားကို ရရှိ ခဲ့သလို လာလီဂါ မှာလည်း ရွှေဖိနပ်ဆုရှင် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ နွေရာသီ မှာတော့ မက်ဆီ ဟာ အာဂျင်တီးနား အသင်းနဲ့ ကိုပါ အမေရိက ဖလားကို ရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆုနဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုတို့ ကိုလည်း မက်ဆီ ကပဲ သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက် လီဝန်ဒေါ့စကီး ကတော့ မနှစ်က ဘိုင်ယန်မြုးနစ် နဲ့ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့သလို ပြည်တွင်း ရွှေဖိနပ်ဆု အပြင် ဥရောပ ရွှေဖိနပ်ဆု ကိုလည်း ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ နိုင်ငံ အသင်းနဲ့ အောင်မြင်မှု မရှိခဲ့ပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွှေဘောလုံးဆု ကို ထိုက်တန်လျက် နဲ့ ( ဆုပေးပွဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့် ) လွဲချော်ခဲ့ရမှုဟာ ဒီနှစ် အတွက် လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို ဆုရရှိလိုသူ အရေအတွက်ကို တိုးပွားစေခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟို ကတော့ မနှစ်က ရာသီမှာ ကလပ် အသင်းတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဖလား ဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ကို ရခဲ့သလို နွေရာသီ တုန်းကလည်း ယူရို ချန်ပီယံ ဆုကြီးကို အီတလီ အသင်းနဲ့ ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲကိုတော့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ် သွားမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
Previous Article နောက်တစ်ကြိမ် အနိုင်ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီးနောက် ပြိုင်ဖက် အသင်းတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
Next Article ဘာစီလိုနာ အတွက် ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် နိုင်ပွဲကို ရယူရင်း စံချိန်တခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ပီကေး